Izindlela zokunyamekela izipikili eziphazamisayo
Sibelana ngeemfihlelo zethu ngokugcina umququzeleli kunye nokuhamba ngeemeko kwimeko efanelekileyo kwinyanga. Akuyena wonke umntu unomonde okanye ixesha lokwenza i-manicure nokuhamba ngeeveki nganye. Kodwa ukunika izipikili zakho imizuzu emibini yokuqwalasela ngemini, unokugcina ubukeka obuhle kunye nemeko, ngaphandle kokuncedisa uncedo lweengcali. Siza kukuxelela ngeendlela ezilula zokunyamekela izipikili ezinobunzima. Iinkqubo ezisisiseko zokunyamekela izipikili ezinokuthi zimele ziyaziwa zonke iintombazana.
1. I-Biotin - i-vithamini yezipikili
Izifundo zibonise ukuba ii-2.5 mg ngosuku lweli qela le-vitamin B liqinisa izipikili kwaye livimbela ukuchithwa kwazo. Ukutya okucebile kwi-zinc (umdlalo, iinqutyana kunye neentlobo ezipheleleyo) kunye neyesinyithi (ubhontshisi, inyama ezixhambileyo, i-vitamine muesli), inceda kwakhona ukuphucula imeko yezipikili. Zama iivithamini zesikhumba, iinwele kunye nezipikili.
2. Akukho uhlambululo lwe-acetone!
I-Acetone iqhuma inkqubo yokususa i-varnish, kodwa igalela izipikili. Sebenzisa iimveliso ezinqabileyo.
3. Sebenzisa i-cream ngesandla
Faka isicelo sekhilimu ngesandla ubuncinane kathathu ngosuku. Ngebusika, khetha ukhilimu onqabileyo otyumayo kunye ne-vitamin E, ephobisa ulusu.
4. Ukunyamekela i-cuticles
Le nxalenye yezipikili iwakhusela ekusulelekeni. Ngoko ke ungayinqumki ikhala. Ukuze i-cuticles ibe nembonakalo enhle, emva kokutyhafaza, yenza nje ubenamathele ngentonga yomthi. Zama i pencil
5. Hlaziya iifowuni zempahla
Ngaphantsi kwezipikili zinani elikhulu leebhaktheriya. Xa usebenzisa i-manicure ne-pedicure accessories, iibhaktheriya zithunyelwa kubo. Iingcali zinikezela ukukhubaza izixhobo zetsimbi, emva kwesicelo ngasinye sokuphatha ngeesepha namanzi afudumeleyo. Ifayile yesilumkiso yesibilini ingenziwa ilandelwe emva kwezicelo ezininzi.
6. Sika kakuhle
Ukuze ugweme ukubonakala kweenxephe ezinqamlekileyo emilenzeni, gungqa izipikili kakuhle, ngaphandle kokujikeleza.
7. Ukuchonga ifom
Ifomu echanekileyo yezikhonkwane yi-square-oval, okanye "spatula". Izipikili zesimo esicacisiweyo sesigcawu sinokupheka emacaleni, kwaye ezijikelezileyo zilungele ukuphula. Ukufumana ifom ye-square-oval, sebenzisa iifayile ze-nail (kuqala unike izipikili ngesimo sikwere, uze ujikeleze iikona).
8. Isiseko sokwazisa
Kungakhathaliseki ukuba ngumbala we-varnish, soloko usebenzisa isiseko se-varnish. Isiseko sizalisa izitenxo kunye neendawo ezincinci kwiiphonkwane kwaye zihambelana nomhlaba. Siyabulela oku, i-varnish ayiyi kuhlala ingcono, kodwa iya kuhlala ixesha elide.
9. Gwema i-toluene kunye ne-formaldehyde
Ezi zilondolozo zandisa ixesha lobomi beli lacquer, likhusele ekukhunjini, kodwa ngexesha elifanayo zinefuthe elibi kakhulu kwimeko yezipikili, zithatha umswakama wazo.
10. Iingcali zobuchwephesha
Sebenzisa isiseko phantsi kwe-varnish ukuhambisa iitenxo phezu komkhombe kunye nokukhusela izipikili ezivela kwimiphumo ye-varnish. Emva koko sebenzisa umgca we-lacquer enemibala, makumile uze uqede ukusebenzisa i-varnish yembatho kwi-nail yonke. Ingubo yokukhusela i-varnish iyangena ngokukhawuleza ize idle zonke iindawo zobuncwane, ifake isalathisi esinokuthenjwa esiphezulu kwesikhonkwane.
Ubuhlalu, i-chess kunye ne-monochrome: ezintathu zendlela ze-nyl kaJanuwari
I-Lacquer i-craquelure - yenza umuthi ongavamile!
Umntu omhle woNyaka omtsha 2016, umfanekiso
Ukuhlambalaza kakuhle ekhaya
Ukunakekelwa kwesikhonkwane kunye nekontenti
Iimvumba zezikhonkwane ezineempembelelo ezingavamile
Imibala ehambelana nemisimbozo yesikhonkwane iphosa kule busika
Izindlela zokuqeqesha ngokuzenzekelayo ukukhululeka kwentlungu ngexesha lokubeletha
I-recipe yesonka seqanda
Indima kayise ekukhuliseni intsapho
I-strawberry jam - zokupheka zokupheka zangaphambili kunye neefoto
Indlela yokunciphisa uxinzelelo lwegazi ngaphandle kweziyobisi
Ukufumana kwakhona u-Anna Sedokova akayi kuhlala kwiidlo
Ukuthulula amanzi abandayo kwimpilo
Ukupheka konyaka omtsha ukupheka
Ukhetho e-US - iindaba zakutshanje, ukusasazwa kwe-intanethi, ngubani okhokela ngethuba
UPaulina Andreeva uxelele ngeendawo zokulala kwibhayisikobho "I-locust"
Isaladi yamakhukhamba kunye nenkukhu
Ukuphazamiseka kokugaya kwiintsana